Xarumaha Waxbarshada - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
Baahida kululaynta iyo qaboojinta ee xarumaha waxbarashada iyo xarummaha waa kuwo balaaran oo kaladuwan, oo u baahan nidaamyo si wanaagsan loo qaabeeyey si loo helo jawi waxbarasho oo aamin ah oo raaxo leh. Airwoods waxay fahamsan tahay baahiyaha qalafsan ee waaxda waxbarashada, waxayna kasbatay sumcad adag qaabeynta iyo rakibidda nidaamyada HVAC ee buuxiya kana badiya filashooyinka macaamiisheena.
Shuruudaha HVAC ee Xarumaha Waxbarshada
Dhinaca waxbarashada, xakamaynta cimilada oo hufan kuma koobna oo keliya bixinta heerkulka raaxada leh ee xarunta oo dhan, laakiin waa maareynta cimilada meelo badan oo yar iyo weyn, iyo sidoo kale la qabsiinta kooxo dad ah oo kulmaya waqtiyo kala duwan oo maalintii ah. Waxtarka ugu sarreeya, tani waxay u baahan tahay shabakad isku-dhafan oo cutubyo ah oo si madax-bannaan loo maamuli karo isticmaalka ugu habboon inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa iyo xilliyada ugu sarreeya. Intaa waxaa sii dheer, maxaa yeelay qol dad ka buuxo wuxuu noqon karaa goob ay ku dhalato cudurada hawada ku jira, waxaa muhiim u ah nidaamka HVAC inuu la kulmo shuruudaha adag ee tayada hawada gudaha iyadoo loo marayo isku darka hawo iyo shaandheyn wax ku ool ah. Sababtoo ah inta badan hay'adaha waxbarashadu waxay ku shaqeeyaan miisaaniyado adag, sidoo kale waxay muhiim u tahay dugsiga inuu awood u leeyahay inuu bixiyo jawi waxbarasho oo wanaagsan iyadoo si wax ku ool ah loo maareeyo kharashyada isticmaalka tamarta.
Hoolka Isboortiga Gudaha
Dhismaha xafiiska macalimiinta
At Airwoods, waxaan kaa caawin doonaa inaad abuurto jawi leh tayada hawada sare ee gudaha iyo heerarka codka hooseeya ee aad ugu baahan tahay raaxo, tas-hiilaad waxbarasho oo waxtar leh oo loogu talagalay ardayda, macallimiinta, iyo shaqaalaha, haddii aad ka shaqeysid dugsi K-12, jaamacad, ama kulliyadda bulshada.
Waxaan ku caanbaxnay awoodeena injineernimada iyo dhisida xalalka HVAC ee caadiga ah ee buuxiya shuruudaha gaarka ah ee xarumaha waxbarashada. Waxaan qabanaa qiimeyn buuxda ee xarunta (ama dhismayaasha ay saameysay xerada), iyadoo la tixgelinayo kaabayaasha, qaabeynta, shaqeynta iyo waxtarka nidaamka hadda jira ee HVAC. Waxaan markaa dejineynaa nidaam si aan u siino xaaladaha ugu habboon meelaha bannaan ee kala duwan. Farsamayaqaannadeena ayaa kula shaqeyn doona si loo hubiyo in nidaamyada hawo-qaadashadaadu ay buuxinayaan ama ka sarreeyaan heerarka tayada hawada. Waxaan sidoo kale rakibi karnaa nidaamyo kormeer caqli-gal ah oo habeyn kara heerkulka meelo badan oo kala duwan iyadoo loo eegayo waqtiyada iyo cabirka fasalka, sidaas darteed waxaad ku jari kartaa biilasha tamarta adoo kaliya kuleylinaya iyo qaboojinaya qolal gaar ah sida looga faa'iideysanayo. Ugu dambeyntiina, si loo kordhiyo wax soo saarka iyo muddada dheer ee nidaamkaaga HVAC, Airwoods waxay bixin kartaa daryeel joogto ah iyo istiraatiijiyad dayactir oo ku habboon shuruudahaaga miisaaniyadda.
Haddii aad dhiseysid xarun cusub oo ka bilaabanta salka, ama haddii aad iskudayeyso inaad keento xarun waxbarasho oo taariikhi ah illaa xeerarka hadda jira ee waxtarka tamarta, Airwoods waxay leedahay agabyo, teknolojiyad iyo khibrad ay ku abuuri karto kuna hirgelin karto xalka HVAC ee la kulmi doona dugsiga baahan sanado badan oo soo socda.
Xalka Dugsiga Hoose ee Jarmalka HVAC
Jaamacadda Beijing Tsinghua
Iskuulka caalamiga ee Suzhou Singapore
Xanaanada isku dhafan ee jaamacadda Beijing
Iskuulka Caalamiga ee Mongolia Hobby